बखत र प्रतिभाको जोडी अब मेरी बास्सैमा ! [भिडियोसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
बखत र प्रतिभाको जोडी अब मेरी बास्सैमा ! [भिडियोसहित]
काठमाडौं, कार्तिक २८ । केही महिनादेखि फेसबुक, युट्युब तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बखत बिष्ट र प्रतिभा चौधरीको जोडी अहिले पनि चर्चाको शिखरमा छ । बखत श्रीमतीभन्दा कदमा होचा भएकाले र उनी भित्रको प्रतिभाले नै यो जोडी अहिले पनि चर्चाको शिखरमा रहेको हो ।
प्रायः युवती आफू सरहको जोडी खोज्ने भएता पनि प्रतिभाले बखतलाई दिएको यो साथको चर्चा अझैं कम भएको छैन । उनीहरुले आफ्नो प्रेमकै लागि परिवार त्याग्दै काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुको घर कैलालीको टिकापुर हो ।
सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको यो जोडीलाई युट्युब च्यानलले पच्छ्याउन छोडेका छैनन् । श्रीमती भन्दा श्रीमान् कदका हिसाबले सानो त्यहीँमाथि अन्तरजातीय विवाह । पक्कै पनि उनीहरुलाई अप्ठ्यारो छ । तर, पनि यो जोडीले हिम्मत हारेको छैन ।
उनीहरुको माया छुटाउन परिवारले प्रयास नगरेको होइन । तर, मायाको अगाडि सबै फिक्का हुन्छन् भने झैं परिवारले पनि उनीहरुको मायालाई छिन्न सकेन । र, अहिले यो जोडी चर्चाको उत्कर्षमा पुगेको छ । यसैबीच, यो जोडीले चर्चित हास्य टेलिश्रृखला ‘मेरी बास्सै’ मा समेत स्थान पाएको छ । गएको अंकमा उनीहरुले मौका पाएका हुन् ।
ट्याग्स: Bakhat Bist #Partiva chaudhary #Meri Bassai